သူငယ်ချင်းအဆင့်ထက်ပိုချင်တယ်... ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ - For her Myanmar
သူငယ်ချင်းစည်းကို ကျော်ဖို့ ချီတုံချတုံဖြစ်နေတုန်းပဲ
ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြားနေကျသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။ ဘာတဲ့ သူငယ်ချင်းအချစ်ထက် ပိုချစ်ပါ ….. တဲ့ ။ အင်း သူငယ်ချင်း အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေဆိုတာလည်း ဘိုးဘိုး ဖွားဖွား တို့ ခေတ်၊ ဖေဖေ မေမေ တို့ခေတ်ကနေ တို့တွေခေတ်အထိ မရိုးနိုင်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ ကြားဖူးတဲ့ စကားပုံလေးတစ်ခုရှိတယ်။ သူငယ်ချင်းကနေ ချစ်သူ ဖြစ်ဖို့ လွယ်တယ်၊ ချစ်သူကနေ သူငယ်ချင်း ပြန်ဖြစ်ဖို့ မလွယ်ဘူးတဲ့။ မှန်သင့်သလောက်တော့လည်း မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အက်ဒမင်ထင်တာကတော့ သူငယ်ချင်းကနေ ချစ်သူဖြစ်ဖို့ကလည်း ထင်သလောက် မလွယ်ဘူးလို့လေ။
အထူးသဖြင့် ကောင်လေးဘက်ကနေ ဖွင့်ပြောဖို့ အခက်အခဲတွေရှိမှာပဲလေ။
သူကလည်း စဉ်းစားမှာပဲ… သူဖွင့်ပြောလိုက်မှ ခင်မင်တာတွေ ပျက်စီးပြီး သူငယ်ချင်းလို ဆက်မချစ်နိုင်တော့ဘဲ ရှိပြီးသားခင်မင်မှုလေး ပျက်စီးသွားမှာကို သူလည်း ကြောက်ရှာမှာပေါ့။ ကောင်မလေးဘက်ကလည်း သူ့ကို ချစ်သူလို ချစ်နိုင်ရင်အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ သူငယ်ချင်းလိုပဲချစ်တယ်ဆို ငြင်းရခက်၊ မငြင်းရခက်ကြီးမဟုတ်လား… အဲဒီအခါ ပြတ်ပြတ်သားသားငြင်းလိုက်ရလို့ မျက်နှာပျက်စရာတွေ ဖြစ်ကုန်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့… ဒီအဖြစ်ကို ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုလေးရှိမှာပဲလေ။
အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲ… ဖွင့်ပြောသင့်လား.. ဒါမှမဟုတ် ရင်ထဲမှာပဲ သိမ်းထားသင့်လား?
ဒီလို စိုးရိမ်မှုတွေကို နားလည်မှုတွေ၊ ပွင့်လင်းမှုတွေနဲ့ ကျော်လွှားသင့်တယ်လို့ အက်ဒ်မင်ကထင်ပါတယ်။ အရင်ဆုံးကောင်လေးဘက်ကနေ၊ ကြည့်ရအောင်။ ကိုယ့်ဘက်က ဖွင့်ပြောဖို့ ကြောက်မိနေတယ်ဆိုရင် ဘာကိုကြောက်တာလဲဆိုတာ အရင်ဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။ သူက ငြင်းလိုက်မှာကို ကြောက်တာလား။ ဒါဆိုရင် မလိုအပ်တဲ့ကိစ္စမှာ တွေဝေနေမိပြီလို့ပဲ ပြောပါရစေ။ အချစ်ကိစ္စမှာ ဖွင့်ပြောဖို့ဆိုတာ Do Or Die ဆိုသလို ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ပါစေ လုပ်သင့်တာလုပ်ရမှာပဲ ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်သင့်တာတွေရှိပါတယ်…
ငြင်းလိုက်မှာကြောက်လို့၊ လက်ရှိအခြေအနေလေးပျက်ပြားသွားမှာ ကြောက်လို့ဆိုတဲ့အတွေးကြောင့် ဇာတ်မျောကြီးနဲ့ အီလည်လည် အဆုံးသတ်သွားမှာပါ။ အဲဒီတော့ ငြင်းကာမှပဲ ငြင်းပါစေ။ ကိုယ့်ဘက်က ဖွင့်ပြောစရာရှိတာ ပြောရမှာပါပဲ။ သူ့ဘက်က ကိုယ့်ကိုမချစ်ဘူးလို့ငြင်းတာက ရှက်စရာမကောင်းပါဘူး။ သူ့ဘက်က မချစ်နိုင်တာလည်း အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ရှိပါတယ်
ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ဖွင့်ပြောလိုက်မှ ခင်မင်မှုလေး ပျက်စီးသွားမှာမလိုလားပါဘူး ဆိုရင်တော့ သူ့ကိုဖွင့်ပြောစဉ်ကတည်းက တစ်ခါတည်းနားလည်မှုယူထားသင့်ပါတယ်။
ဥပမာ ငါ့ကိုချစ်လား မချစ်ဘူးလားဆိုတာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအဖြေပေးလို့ရပါတယ်။ မချစ်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ အရင်လို သူငယ်ချင်းလိုတော့ ဆက်ခင်မင်ခွင့်ပေးပါ ဆိုတာမျိုးလေး သူ့ကိုပြောပြပေါ့နော်… အငြင်းခံရရင်တော့ အရင်ကလောက် မရင်းနှီးတော့ပေမဲ့ ခင်မင်မှုလေးတော့ ကျန်ခဲ့ဦးမှာပါ.. အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ပုံမှန်ပဲ ပြန်ဖြစ်သွားမှာပါနော်…
မိန်းကလေးဘက်ကလည်း ကိုယ်က သူငယ်ချင်းလိုခင်ရသူက ဖွင့်ပြောလာတဲ့အခါ ငြင်းလဲငြင်းချင်တယ် ခင်မင်မှုလေးပျက်မှာကြောက်တယ်ဆိုရင် ငါနင့်ကို သူငယ်ချင်းလိုပဲ ဆက်ခင်မင်ပါရစေ။ ငါတို့ကြားမှာ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပဲ သဘောထားပြီး ဆက်ခင်ကြရအောင်လို့ အဖြေပေးသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ အခင်အမင်လည်း မပျက်ဘူးပေါ့လေ… ခဏတာတော့ နာကျင်သွားမှာ မှန်ပေမဲ့ အခြေအနေက အရမ်းကြီး ရုပ်မဆိုးတော့ဘူးပေါ့..
Related Article >>> သူငယ်ချင်းအဆင့်ထက် ပိုနေကြောင်း သိနိုင်မယ့် အချက် (၁၀)ချက်
ဒါမှမဟုတ် နားလည်မှု ဆက်ယူရမယ့် ကာလလား….
ခင်မင်တာလည်း သိပ်မကြာသေးချိန်၊ သူ့အကြောင်း ကိုယ့်အကြောင်း သိပ်မသိသေးချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်က သူ့ကို တွယ်တာမိနေတာက သူငယ်ချင်းလိုမျိုးလား၊ ချစ်သူလိုမျိုးလားဆိုတာ သေသေချာချာသိအောင် ဆန်းစစ်ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ ကာလမျိုးလည်း ရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီလို အချိန်မျိုးဆိုရင်တော့ နှစ်ဦးသားညှိနှိုင်းပြီး အချိန်တစ်ခုပေးလို့ ညှိနှိုင်းသင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ခင်တာကြာလာပြီးမှ စိတ်ပြောင်းလာတဲ့သူ တစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်သံယောဇဉ်က ဘာလဲ၊ ကိုယ်ရော စိတ်ပြောင်းနိုင်ပါ့မလား၊ ခံစားချက်တွေ ပြောင်းလဲနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ သေချာစဉ်းစားဖို့ အချိန်လိုပါတယ်နော်..
ပြောလို့မရဘူးလေ။ ကိုယ်က သူ့ကို ချစ်နေမိတာကို ကိုယ်ကမသိဘဲ သူငယ်ချင်းလိုပဲ ခင်နေတယ်လို့ ထင်နေမိတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ ဒါကြောင့် သေသေချာချာလေး အချိန်ယူစဉ်းစားကြည့်ရင် ကိုယ်ကသူ့ကို ဘယ်လိုအချစ်မျိုးနဲ့ ချစ်တာလဲဆိုတာ သိနိုင်တာပေါ့။
အချင်းချင်းတစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်အရမ်းနားလည်သွားတဲ့အခါ ပူလောင်တဲ့ အချစ်မျိုးမဟုတ်ဘဲ အေးမြတဲ့သူငယ်ချင်းမေတ္တာမျိုးနဲ့လည်း ချစ်သူတွေအဖြစ် လက်တွဲသွားလို့ရတယ်လေ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ချစ်သူတွေအဖြစ်နဲ့အဆင်မပြေဘဲ ဘော်ဒါတွေဘဝနဲ့ပဲ ဆက်လက် လက်တွဲသွားဖို့ အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာ သိသွားကြတော့လည်း တစ်မျိုးကောင်းတာပေါ့နော်။
သူက ကိုယ့်ကိုချစ်နေလားဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ဒါမှမဟုတ် သူကိုယ့်ကို ချစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ပထမ မေးခွန်းဖြစ်တဲ့ သူက ကိုယ့်ကိုယ်ချစ်နေလား မချစ်ဘူးလား သိနိုင်ဖို့ခန့်မှန်းတာကတော့ ခန့်မှန်းလို့ မလွယ်ဆုံးပါပဲ။ သူက ကိုယ့်အပေါ် ရင်းရင်းနှီးနှီး၊ ခင်ခင်မင်မင်နေရုံနဲ့၊ သူ ကိုယ့်အပေါ် ကြင်နာယုယတာ၊ သံယောဇဉ်ရှိနေတာနဲ့လည်း ကိုယ့်ကို ချစ်မိနေပြီလို့ တွေးလို့မရပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း သံယောဇဉ်ပိုတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။
ကိုယ့်အပေါ် သိပ်ရင်းရင်းနှီးနှီးနွေးနွေးထွေးထွေး မရှိတာနဲ့ မချစ်ဘူးလို့လည်း ထင်လို့မရပြန်ဘူး။ တချို့တွေက ချစ်နေတဲ့သူကို ရှိန်ပြီး ခပ်ဝေးဝေး နေတတ်တာလေ။ အကောင်းဆုံးက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖွင့်ပြောလိုက်တာပါပဲ။
ဒါကတော့ သူငယ်ချင်းအဆင့်ကနေ နောက်တစ်ဆင့်တက်ချင်နေတဲ့ ကောင်လေးတွေကိုရော၊ ယောင်းတို့ကိုပါ သေချာစဉ်းစားပြီး ပေးခဲ့တဲ့အကြံဥာဏ်လေးတွေပါ။ အဆင်ပြေသွားကြရင်လည်း အက်ဒမင်ကိုပြန်ပြောကြဦးနော်။
သူငယျခငျြးစညျးကို ကြျောဖို့ ခြီတုံခတြုံဖွဈနတေုနျးပဲ
ငယျငယျကတညျးက ကွားနကေသြီခငျြးလေးတဈပုဒျရှိပါတယျ။ ဘာတဲ့ သူငယျခငျြးအခဈြထကျ ပိုခဈြပါ ….. တဲ့ ။ အငျး သူငယျခငျြး အခဈြဇာတျလမျးတှဆေိုတာလညျး ဘိုးဘိုး ဖှားဖှား တို့ ခတျေ၊ ဖဖေေ မမေေ တို့ခတျေကနေ တို့တှခေတျေအထိ မရိုးနိုငျတဲ့ဇာတျလမျးတှပေါ။ ဒါပမေဲ့ ကွားဖူးတဲ့ စကားပုံလေးတဈခုရှိတယျ။ သူငယျခငျြးကနေ ခဈြသူ ဖွဈဖို့ လှယျတယျ၊ ခဈြသူကနေ သူငယျခငျြး ပွနျဖွဈဖို့ မလှယျဘူးတဲ့။ မှနျသငျ့သလောကျတော့လညျး မှနျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အကျဒမငျထငျတာကတော့ သူငယျခငျြးကနေ ခဈြသူဖွဈဖို့ကလညျး ထငျသလောကျ မလှယျဘူးလို့လေ။
အထူးသဖွငျ့ ကောငျလေးဘကျကနေ ဖှငျ့ပွောဖို့ အခကျအခဲတှရှေိမှာပဲလေ။
သူကလညျး စဉျးစားမှာပဲ… သူဖှငျ့ပွောလိုကျမှ ခငျမငျတာတှေ ပကျြစီးပွီး သူငယျခငျြးလို ဆကျမခဈြနိုငျတော့ဘဲ ရှိပွီးသားခငျမငျမှုလေး ပကျြစီးသှားမှာကို သူလညျး ကွောကျရှာမှာပေါ့။ ကောငျမလေးဘကျကလညျး သူ့ကို ခဈြသူလို ခဈြနိုငျရငျအကွောငျးမဟုတျဘူး။ သူငယျခငျြးလိုပဲခဈြတယျဆို ငွငျးရခကျ၊ မငွငျးရခကျကွီးမဟုတျလား… အဲဒီအခါ ပွတျပွတျသားသားငွငျးလိုကျရလို့ မကျြနှာပကျြစရာတှေ ဖွဈကုနျရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲပေါ့… ဒီအဖွဈကို ကွောကျတယျဆိုတဲ့ စိုးရိမျမှုလေးရှိမှာပဲလေ။
အဲဒီလို အခွအေနမြေိုးမှာ ဘာဆကျလုပျသငျ့လဲ… ဖှငျ့ပွောသငျ့လား.. ဒါမှမဟုတျ ရငျထဲမှာပဲ သိမျးထားသငျ့လား?
ဒီလို စိုးရိမျမှုတှကေို နားလညျမှုတှေ၊ ပှငျ့လငျးမှုတှနေဲ့ ကြျောလှားသငျ့တယျလို့ အကျဒျမငျကထငျပါတယျ။ အရငျဆုံးကောငျလေးဘကျကနေ၊ ကွညျ့ရအောငျ။ ကိုယျ့ဘကျက ဖှငျ့ပွောဖို့ ကွောကျမိနတေယျဆိုရငျ ဘာကိုကွောကျတာလဲဆိုတာ အရငျဆနျးစဈသငျ့ပါတယျ။ သူက ငွငျးလိုကျမှာကို ကွောကျတာလား။ ဒါဆိုရငျ မလိုအပျတဲ့ကိစ်စမှာ တှဝေနေမေိပွီလို့ပဲ ပွောပါရစေ။ အခဈြကိစ်စမှာ ဖှငျ့ပွောဖို့ဆိုတာ Do Or Die ဆိုသလို ဖွဈခငျြရာဖွဈပါစေ လုပျသငျ့တာလုပျရမှာပဲ ဆိုတဲ့ စိတျဓာတျနဲ့ ဆုံးဖွတျသငျ့တာတှရှေိပါတယျ…
ငွငျးလိုကျမှာကွောကျလို့၊ လကျရှိအခွအေနလေေးပကျြပွားသှားမှာ ကွောကျလို့ဆိုတဲ့အတှေးကွောငျ့ ဇာတျမြောကွီးနဲ့ အီလညျလညျ အဆုံးသတျသှားမှာပါ။ အဲဒီတော့ ငွငျးကာမှပဲ ငွငျးပါစေ။ ကိုယျ့ဘကျက ဖှငျ့ပွောစရာရှိတာ ပွောရမှာပါပဲ။ သူ့ဘကျက ကိုယျ့ကိုမခဈြဘူးလို့ငွငျးတာက ရှကျစရာမကောငျးပါဘူး။ သူ့ဘကျက မခဈြနိုငျတာလညျး အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ရှိပါတယျ
ဒါမှမဟုတျ ကိုယျဖှငျ့ပွောလိုကျမှ ခငျမငျမှုလေး ပကျြစီးသှားမှာမလိုလားပါဘူး ဆိုရငျတော့ သူ့ကိုဖှငျ့ပွောစဉျကတညျးက တဈခါတညျးနားလညျမှုယူထားသငျ့ပါတယျ။
ဥပမာ ငါ့ကိုခဈြလား မခဈြဘူးလားဆိုတာ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးအဖွပေေးလို့ရပါတယျ။ မခဈြဘူးဆိုရငျတောငျမှ အရငျလို သူငယျခငျြးလိုတော့ ဆကျခငျမငျခှငျ့ပေးပါ ဆိုတာမြိုးလေး သူ့ကိုပွောပွပေါ့နျော… အငွငျးခံရရငျတော့ အရငျကလောကျ မရငျးနှီးတော့ပမေဲ့ ခငျမငျမှုလေးတော့ ကနျြခဲ့ဦးမှာပါ.. အခြိနျကွာလာတာနဲ့ အမြှ ပုံမှနျပဲ ပွနျဖွဈသှားမှာပါနျော…
မိနျးကလေးဘကျကလညျး ကိုယျက သူငယျခငျြးလိုခငျရသူက ဖှငျ့ပွောလာတဲ့အခါ ငွငျးလဲငွငျးခငျြတယျ ခငျမငျမှုလေးပကျြမှာကွောကျတယျဆိုရငျ ငါနငျ့ကို သူငယျခငျြးလိုပဲ ဆကျခငျမငျပါရစေ။ ငါတို့ကွားမှာ ဘာမှမဖွဈခဲ့ဘူးလို့ပဲ သဘောထားပွီး ဆကျခငျကွရအောငျလို့ အဖွပေေးသငျ့တယျထငျပါတယျ။ အခငျအမငျလညျး မပကျြဘူးပေါ့လေ… ခဏတာတော့ နာကငျြသှားမှာ မှနျပမေဲ့ အခွအေနကေ အရမျးကွီး ရုပျမဆိုးတော့ဘူးပေါ့..
Related Article >>> သူငယျခငျြးအဆငျ့ထကျ ပိုနကွေောငျး သိနိုငျမယျ့ အခကျြ (၁၀)ခကျြ
ဒါမှမဟုတျ နားလညျမှု ဆကျယူရမယျ့ ကာလလား….
ခငျမငျတာလညျး သိပျမကွာသေးခြိနျ၊ သူ့အကွောငျး ကိုယျ့အကွောငျး သိပျမသိသေးခြိနျပဲဖွဈဖွဈ၊ ကိုယျက သူ့ကို တှယျတာမိနတောက သူငယျခငျြးလိုမြိုးလား၊ ခဈြသူလိုမြိုးလားဆိုတာ သသေခြောခြာသိအောငျ ဆနျးစဈဖို့ လိုအပျနတေဲ့ ကာလမြိုးလညျး ရှိနနေိုငျပါသေးတယျ။ ဒီလို အခြိနျမြိုးဆိုရငျတော့ နှဈဦးသားညှိနှိုငျးပွီး အခြိနျတဈခုပေးလို့ ညှိနှိုငျးသငျ့ပါတယျ။ ပွီးတော့ ခငျတာကွာလာပွီးမှ စိတျပွောငျးလာတဲ့သူ တဈယောကျရှိတယျဆိုရငျလညျး ကိုယျ့သံယောဇဉျက ဘာလဲ၊ ကိုယျရော စိတျပွောငျးနိုငျပါ့မလား၊ ခံစားခကျြတှေ ပွောငျးလဲနိုငျပါ့မလားဆိုတာ သခြောစဉျးစားဖို့ အခြိနျလိုပါတယျနျော..
ပွောလို့မရဘူးလေ။ ကိုယျက သူ့ကို ခဈြနမေိတာကို ကိုယျကမသိဘဲ သူငယျခငျြးလိုပဲ ခငျနတေယျလို့ ထငျနမေိတာမြိုးလညျး ဖွဈနိုငျတာပဲ။ ဒါကွောငျ့ သသေခြောခြာလေး အခြိနျယူစဉျးစားကွညျ့ရငျ ကိုယျကသူ့ကို ဘယျလိုအခဈြမြိုးနဲ့ ခဈြတာလဲဆိုတာ သိနိုငျတာပေါ့။
အခငျြးခငျြးတဈယောကျအကွောငျး တဈယောကျအရမျးနားလညျသှားတဲ့အခါ ပူလောငျတဲ့ အခဈြမြိုးမဟုတျဘဲ အေးမွတဲ့သူငယျခငျြးမတ်ေတာမြိုးနဲ့လညျး ခဈြသူတှအေဖွဈ လကျတှဲသှားလို့ရတယျလေ။ ဒါမှမဟုတျလညျး ခဈြသူတှအေဖွဈနဲ့အဆငျမပွဘေဲ ဘျောဒါတှဘေဝနဲ့ပဲ ဆကျလကျ လကျတှဲသှားဖို့ အဆငျပွတေယျဆိုတာ သိသှားကွတော့လညျး တဈမြိုးကောငျးတာပေါ့နျော။
သူက ကိုယျ့ကိုခဈြနလေားဆိုတာ ဘယျလိုသိနိုငျမလဲ ဒါမှမဟုတျ သူကိုယျ့ကို ခဈြလာအောငျဘယျလိုလုပျရမလဲ
ပထမ မေးခှနျးဖွဈတဲ့ သူက ကိုယျ့ကိုယျခဈြနလေား မခဈြဘူးလား သိနိုငျဖို့ခနျ့မှနျးတာကတော့ ခနျ့မှနျးလို့ မလှယျဆုံးပါပဲ။ သူက ကိုယျ့အပျေါ ရငျးရငျးနှီးနှီး၊ ခငျခငျမငျမငျနရေုံနဲ့၊ သူ ကိုယျ့အပျေါ ကွငျနာယုယတာ၊ သံယောဇဉျရှိနတောနဲ့လညျး ကိုယျ့ကို ခဈြမိနပွေီလို့ တှေးလို့မရပါဘူး။ သူငယျခငျြးတှဆေိုတော့ သူငယျခငျြး အခငျြးခငျြး သံယောဇဉျပိုတာလညျး ဖွဈနိုငျတာပဲ။
ကိုယျ့အပျေါ သိပျရငျးရငျးနှီးနှီးနှေးနှေးထှေးထှေး မရှိတာနဲ့ မခဈြဘူးလို့လညျး ထငျလို့မရပွနျဘူး။ တခြို့တှကေ ခဈြနတေဲ့သူကို ရှိနျပွီး ခပျဝေးဝေး နတေတျတာလေ။ အကောငျးဆုံးက ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဖှငျ့ပွောလိုကျတာပါပဲ။
ဒါကတော့ သူငယျခငျြးအဆငျ့ကနေ နောကျတဈဆငျ့တကျခငျြနတေဲ့ ကောငျလေးတှကေိုရော၊ ယောငျးတို့ကိုပါ သခြောစဉျးစားပွီး ပေးခဲ့တဲ့အကွံဉာဏျလေးတှပေါ။ အဆငျပွသှေားကွရငျလညျး အကျဒမငျကိုပွနျပွောကွဦးနျော။
Tags: bff, friends, love, relationships, tips, ways
Sugar Cane September 24, 2018